Madaxweyne Shariif iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Magaalada Addis Ababa | raascasayrmedia.com
← Bulshada ku dhaqan Magaalada Caluula oo biyo la,aan baahsani soo food saartay
Xisbi loogu magacdaray Dimuqraadiyada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo Muqdisho looga dhawaaqay →
Madaxweyne Shariif iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Magaalada Addis Ababa
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo ay uga qaybgalayaan shirka Midowga Afrika.
“Wafdi, uu madaxweynaha Soomaaliya hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Addis Ababa, waxaana soo dhaweeyay xubno uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ahan ra’iisul wasaare ku xigeenka Maxamed C/llaahi Oomaar,” ayuu yiri safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Siciid Yuusuf Nuur oo la hadlay saxaafadda qaarkood.
Xubnaha wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxaa ka mid ah: wasiirka maaliyadda iyo lacagta Xuseen Cabdi Xalane, wasiirka waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare C/nuur Sheekh Maxamed iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne Sheekh Shariif, ayaa Itoobiya uga qayb-galaya shirkii madaxda Afrika oo berri Axad ah ka furmaya xarunta Midowga Afirka ee Addis Ababa, waxaana shirkaas marka uu dhammaado ay madaxweynaha iyo wafdigiisu ka qaybgalayaan shir kale oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Shariif, ayaa isla maanta Addis Ababa kula kulmay wafdi ka socday dalka Talyaaniga iyo xubnaha urur goboleedka IGAD, isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca ammaanka, maadaama ay dowladdu kaga sugan Muqdisho lix degmo oo keliya.
Toddobaadkan, ayuu madaxweyaha Soomaaliya booqasho laba maalmood qaatay ku tagay magaalada Kampala ee dalka Uganda, isagoo kulan uu la qaatay dhiggiisa dalkaas kala hadlay xaaladda ammaan ee Soomaaliya, maadaama ay ciidammo ka joogaan Muqdisho.